Shiinaha Dhoobo Cagaaran Oo Dhamaystiran Oo Indhaha Indha La 'ah oo leh warshad madax weyn leh iyo soosaarayaasha | Yuke
Wareeg Bixiyaha Buuxda ee birta ah ee birta leh ee Madaxa Weyn
Madaxa qubbadani waxyaabaha soo socda ee indha la 'waxaa laga sameeyaa bir. Waxay noqon kartaa mid sii waara, walaac badan, ka dabacsan oo moodada badan. Waxay leedahay baaxad sare, adkeysi daal wanaagsan, waana mid adag oo qaro weyn. Waxaana loo adeegsan karaa dhinacyo kala duwan.
Waxaan nahay soosaar weyn oo lagu xirayo Shiinaha, rivets, nuts, riveter gacanta ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan.
Waxaan soo saari karnaa noocyo kala duwan oo aluminium indho sarcaad ah waxaanan sidoo kale u habeyn karnaa alaabta sida aad u baahan tahay, waxaan jeclaan lahayn inaan ku siino qiimaha tartanka, oo aan ku dhisno iskaashi dheer adiga iyo waqtigaaga.
Waxyaabaha: Jirka Birta / Birta Birta ah
Dhammaystirka dusha: Zinc dahaadhay / Zinc dahaadhay
Ballaca: 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm,(1/8, 5/32, 3 / 16,1 / 4)
Kartoo: Loo habeeyay
Heerka: IFI-114 iyo DIN 7337, Heer aan caadi ahayn
Nooca Shirkadda Soo saare
Codsiga: Wiishka, dhismaha, qurxinta, alaabta guriga, warshadaha.
Awoodda Wax Soosaarka: 500 Tan / Bishii
Astaan ​​ganacsi: YUKE
Asal ahaan: WUXI Shiinaha
Luqad: Dib-u-dhacyo, Dib-u-dhacyo
QC (kormeer meel kasta ah) Is-hubi iyada oo loo marayo wax soo saarka
Khibrad wax soo saar xirfadeed.
YUKE RIVET wuxuu ku takhasusay rivet indho beel ah, lowska rivet, xiraha in ka badan 10 sano.
Xarumaha wax soo saarka oo dhameystiran
Waxaan haynaa hal xariiq oo dhameystiran oo ay ku jiraan mashiinka sameynta qabow, mashiinka dhalada, mashiinka daaweynta, mashiinka isku imaatinka, mashiinka baaritaanka, mashiinka wax lagu xiro iyo wixii la mid ah.
Waqtiga dhalmada oo kooban.
Waxaan damaanad qaadi doonnaa gaarsiinta 15 ~ 20 maalmood hal konteenar
Waxaan sidoo kale soo saari doonaa xoogaa rivet ah oo kayd ah.
Waxaan u adeegsanaa xirmooyinka caadiga ah dhoofinta iyo baakidhyada.
Sumadaha amniga ayaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaali doonaa baakadaha iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Waxaa la aasaasay 2007, Wuxi Yuke wuxuu ahaa soo saare xirfadlayaal ah rivets indhooleyaal iyo dhejiyeyaal sanado badan.
Waxaan haynaa maamul buuxa iyo wax soo saar si loo hubiyo wax soo saar iyo adeegyo tayo sare leh.
Wax soo saarkayaga ayaa loo dhoofiyaa dhammaan qaybaha adduunka waxayna leeyihiin sumcad wanaagsan. Waxaan xiriir dheer la leenahay macaamiisheenna.
Isla mar ahaantaana, waxaan sidoo kale isku darnaa cilmi baarista iyo horumarinta, waxaan aaminsanahay inaan u keeni karno alaabooyin ka wanaagsan iyo adeegyo wanaagsan macaamiisheena. Waxaan u soo qaadan karnaa waayo-aragnimo qancin leh macaamiisheenna.
Hore: Aluminium Dome Madaxa Indha Indheynta leh Madaxa Weyn
Xiga: Dome Head Blind Rivet oo leh rinji midab leh
Xidhan Dhammaadka Dome Madaxa Indhoolayaasha
Ahama Steel Open Dome Head Blind Pop Rivet
Heerka Indha-sarcaadku wuu Dhoofayaa Madaxa
Steel Mandrel Dome Head Blind Rivet
Noodhadhka 'Rivet Nuts' Gelitaannada dunta leh
Ahama biraha xiro rivets dhamaadka